↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၇၄။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပဲခူးမြို့&oldid=539253" မှ ရယူရန်
၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။